Machemedzero andakaita twuvana kwechikoro nemboro | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Machemedzero andakaita twuvana kwechikoro nemboro
Ndini hangu ndainge ndapinda basa rechipurisa muKadoma, ndichigara hangu patuma bachelor cottage twaive kuseri kweprison yaiva mutown next to the hospital.
Panguva iyi tainge tisangazivi nezve AIDS kana HIV tainge tichangotanga kuzvinzwa. Semunhu aigara pedyo nechikoro ichi chaingoendwa nevana vevanhu vane mari chete nevarungu painge paine maSalad chaiyo. Neumwe musi I was off hangu walking around town ndikasangana nekamwe kamusikana, mwana ainge akanaka iyeye zvainwisa mvura.
Takatanga kutaura hedu nezveupenyu and school so ndakamuudza kuti ndaiva mupurisa and she was happy to hear that. Imi vana vechikoro musikanzwa I am sure kumba kwavo Angie aigara akavharirwa mudurawall. We agreed to meet the next day and this time we met close to the school gate and semunhu aiva in uniform yebasa people did not suspect anything vaingofunga kuti mupurisa is just having a conversation nevana vechikoro. Angie was with her friends and they were all in form 6.
Angie called her parents achiti achauya kumba late achiti she was going to study at school. This was all a lie ndakaenda naye to my cottage, imi I did not know kuti vana ava always want to experiment especially kana ropa rakunyanyo mhanya mumuviri wavo. Takasvika tikapinda mumba and no one was around since most people vainge vaenda kumabasa. Hatina kana kuda kupedza nguva coz i wanted kudzokera kubasa, Angie akabvisa uniform and akatanga kundibata bata and then mboro yangu haina kana kutora nguva kumuka apa raiva rino zimboro.
Since Angie was just a school girl beche rake was very tight apa aida kuita zveainge awona papono and it seems like she was really up for it. Ini manje ndaitya kuti rape mwana wechikoro. Angie akatanga kundidya mboro inini ndichipuruzira beche rake apa rainge ratota kare, ndakabva ndamubatisa bed ndikatanga kumusvira nekumashure, mwana akaridza mhere zvekuti dai vanhu vaive around someone would have come knock on my door to ask. Aingoti aaaaaahhhh maiweeeee kaaaaannnii , ndikada kuburitsa mboro obva ati iwe svirisa kani usaburitse zvirikunaka kani maaaiiiihwwwweeee nhasi ndofa nemboro iweee kani.
Tapedza ndakamira for a while Angie akatanga kubuda mumba, I followed a few minutes ndichimhanya then we caught up and i walked her home. What I didn’t know was Angie’s friends already knew kuti taizoenda kunosvirana. The next day ndakanzwa kamwe kashamwari kaAngie kakunditi I heard kuti unogona, at first i didn’t know kuti arikutaura nezvei. Imi vana vakadzidza ava they don’t hide. Uyu ainzi Nyarai akabva ati ndirikuda kuti undichemedze kupfuura zvawakaita Angie.
Ndakaita kunge munhu ashamisika but hey pane murume angarambe here kusvira iye apihwa mahara. When i tried to tell Angie kuti shamwari yake came to me , she already knew and she said I know Nyarai arikuda kuti umusvirewo. Vana ava were only form 6 pa Jameson High , I couldn’t believe it but one thing i was sure they were not going to report me to the police.
Nyarai akauya apa aiva nemazigaro, akapfupika imi ka imi, munogonzwa imi. Nyarai aiita kunge aiiziva zvaaiita more than Angie ndakapotsa ndatunda ndisati ndasvira nekuti she was good kushandisa rurimi rwake. Ndakazoti ndakumubata bata aiita kuridza mhere zveshuwa apa ndisati ndambosvira kana kuisa pamuromo zvapo. Aiita masounds aya emunhu ari papono achingoti aaaahhhhhhh mmmmmm aaaahhhhh. Takasvirana kwe almost 30mins then akuenda akabva ati Stella is coming to visit you tomorrow , ndikati heeee zvikanzi you heard me ….
Ndainge ndakutya kuti vana ava varikudei so ndakambotanga kuvatiza asi mumwe musi I was off ndiripamba hangu ndikaona vana vasvika in their school uniforms, when they realised I was home vakangosiya Stella vakabva vayenda…. Zvakazoiita na Stella ndichakuudza next week…
Previous articleMATYPES EMBORO DZINONAKA NEDZISINGANAKE
Next articleMusviri mukuru young Kells arikuchemedza mukadzi wemunhu nemboro